Firefox mbanye anataghị ikike: Chọọ My Blog iji Keymarks | Martech Zone
Tuesday, January 23, 2007 Sunday, October 4, 2015 Douglas Karr
Matt na Net Monkey mere ka m chee echiche taa. Ọ nọ na-achọ okwu site na iji arụmọrụ ntọala arụnyere n'ime Firefox. Ekwenyeghi m ma ọ bụrụ na ị jirila nke a mana ọ bụ ihe kachasị mma. Wuru na Firefox bụ isi okwu ndị a:
dict - Akwụkwọ ọkọwa okwu
see okwu - Nchọta Google na ebuka: onye ọrụ
Ihe ọ pụtara bụ na ị nwere ike ile anya otu okwu site na ịpị:
Kụrụ tinye ma ị nwetara ya! Mma mma? Ọ dị mma karịa, ịnwere ike ide ederede nke gị na Firefox! Nke a bụ otu:
Gaa na ibe edokọbara> Hazie ibe edokọbara
Right pịa Ndenye Searches na họrọ New Bookmark
N'elu bia okwu gi ma inwere ike iju ya n'ime onwe gi% s dika ihe eji dochie anya gi.
Yabụ lee otu ị nwere ike isi setịpụ keymark iji chọọ blog nke gị site na iji WordPress:
Ugbu a, ihe m kwesiri ime bu:
Nsonaazụ ọchụchọ saịtị m maka "feedburner" ga-abịa!
E nwere ọtụtụ narị ụzọ na i nwere ike iji nke a… koodu searches, technorati searches, Alexa searches… dị nnọọ eche nke niile fun i nwere ike inwe!
Mmelite: Ndị a bụ ụfọdụ akara ngosi dị jụụ ịgbakwunye:
Ihe ederede WordPress
Google Codesearch maka Java
Ihe mgbaru ọsọ nke 2007
Jenụwarị 23, 2007, elekere 8:27 nke abalị
moly di nsọ nke bara uru!
Jenụwarị 23, 2007, elekere 9:33 nke abalị
Daalụ Sterling! Etinyere m ụfọdụ na nbipute izizi.
Nke a bụ ọkacha mmasị m: